MAANHADAL: Falanqayn Xiisadda Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta & Heshiisyada Puntland (dhegayso) – Radio Daljir
MAANHADAL: Falanqayn Xiisadda Soomaaliya iyo Imaaraatka Carabta & Heshiisyada Puntland (dhegayso)
Abriil 27, 2018 12:02 g 3
Dowladda Imaaraatka Carabta iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxaa wali u dhaxeeyo khilaaf siyaasadeed iyadoo xiriirkoodu sii xumaaday, kadib markii ay dowladda Soomaaliya qabatay lacag dhan sagaal miyan iyo bar doolar.
Madaxwaynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa ku sugan dalka Isutagga Imaaraatka Carabta, iyadoo ay dowladda Imaaraatka Carabta ay horay heshiisyo ula gashay Puntland oo lagu horumarinayo dekedda iyo ciidamada badda Puntland.
Barnaamijkeena Maanhadal ayaa todobaadkan lagu faalaynayaa arimahaasi, waxaana kaqaybgalaya xildhibaano katirsan baarlamaanka Puntland, aqoonyahano iyo siyaasiyiin.
Hoos kadhagayso Axmed Sh, Maxamed Tallman ayaa inala socod siinaya.
MAANHADAL 240 Wararka 21296
Jaamacadda Badda Cas oo Sagootin u samaysay Qaar kamid ah Ardaydeeda (dhegayso)
Barakac xoogan oo kasocda Baladwayne (sawiro)
Puntlander 2 years ago
Waa ku taageersanahay madaxwaynaha siduu u abaaray hawshaan waana ku.mahadsanyahay waa arinka xiriirka emaratka arinka dekadda hadaan usoo daadego dekad meesha maba jirin meel yar oo doonyo kusoo xirtaan oo xabaalantay bay ahayd aad baana u bogaadinayaa innla lakeenay shirkad dhisaysa dadka qaylinaya waxaan leeyahay naftiina ha u fekerina iyo maxaan cunaa maanta ee dekkadaan ilmihiinu u aayayaan ku dedaala sidii ay u dhismi lahayd laablakaca cidna idinka yeeli maysee qaylada yareeya dalku madax iyo barlaman iyo dawlad puntland la dhuhuu leeyahee qolyaha xamar waxaan leeyahay adeerayaal taydana ii yeel aan cirkaas maree taadana burburi laydinka yeeli.mayo dalku waa faderal dastuurka aad sheegaysaan kan puntland baa ka horeeyey nabad iyo nololna hortiin baan haystey hadana waa haystaa waana haysanayaa dawladaan aad rabtaan inaaad dalka madaxa kaga qabsataan ee kacaanlamoodka ah anagaaba awoodeena iyo xoogeena ku keenay adeerayaal nin raga walaal.wuxuu.ku dhaamo la waah ee emarat anagu dad wanaagsan baanu u.naqaanaa qatar iyo turki nooga dhigi maysaan dad karaamaysan.emaratna naga dhaadhicin.maysaan inay dad xun.yihiin waxaad rabtaana nooma.yeerin kadhaane bal horta dib isugu laabta oo gadaal.isu fiirsha
Waxaan qiyaasayaa jawaabta oo kooban, inuu walaalka warqadan qoray uu hurday ama ……..
Ali dheere, 2 years ago
Khilaaf buurani kama dhexjiro Somalia iyo Immaratka. Madaxweynaha iyo Raisalweynaha Somalia midna kama hadlin inuu khilaaf jiroh. Immaraatku waxay Somalia keeneen lacag badan oo an sharciyeysanayn Somaliyana wey qabatay laccagtaas walina waxay ku wadaa baaritaan. Kadibna Immaraatku ayagaa go’aansaday inay Mogadushu ka guuraan, shaqooyinkii ay ka wadeen halkaasna ay joojiyeen.
U Jawaab Ali dheere, Buri halceliska